Ogaden News Agency (ONA) – Tahriibayaal Laga soo Badbaadiyay Badda Mediterranean.
Tahriibayaal Laga soo Badbaadiyay Badda Mediterranean.
Ciidamada ilaalada xeebaha dalka Spain ayaa sheegay in ay soo badbaadiyeen in ka badan 250 qof oo ay caruur ku jiraan, kuwaasi oo isku dayayay in ay ka soo talaabaan badda Mediterranean.
Dadkani ayaa sida ay sheegeen saraakiisha Ciidamada ilaalada xeebaha dalka Spain waxa ay doonayeen in ay gaadhaan dalalka Yurub. Tahriibayaashani ayaa laga soo badbaadiyay 5 Doon oo ah kuwa yaryar oo ay la socdeen.
Doomahani ayaa la sheegay in ay ka soo shiraacdeen dalka Morocco islamarkana dadka saarnaa waxay inta badan ka soo jeedaan wadamada Afrika ee Saxaaraha ka hooseeya. Hay’ada caalamiga ah ee socdaalka ee (IOM) ayaa sheegtay in muhaajiriin ka badan 15,000 ay soo gaareen Spain sanadkan.
Tirada dadka muhaajiriinta ah ee u safri jiray Taliyaaniga ayaa hoose u dhacday. Balse wali waxa Taliyaaniga uu la daalaa dhacayaa tiro ka badan 100,000 oo muhaajiriin ah oo soo gaadhay dalka Taliyaaniga sanadkan 2017 ka.